Masiixu wuu kacay, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Iimaanka Masiixiyiintu wuxuu taaganyahay ama ku dhacaa sarakicidda Ciise. Laakiin haddii Masiixu aanu sara kicin, rumaysadkiinnu waa liitaa, oo weli dembiyadiinna ayaad ku jirtaan. Dabadeedna kuwii Masiixa ku dhintayna waa la waayey » (1 Korintos 15,17). Sarakiciddii Ciise Masiix ma aha oo keliya caqiido in la difaaco, waa inay la micno tahay farqi wax ku ool ah nolosheena Masiixiga. Sidee taasi macquul u tahay?
Sarakicidda Ciise wuxuu ka dhigan yahay inaad isaga ku kalsoonaan karto. Ciise wuxuu xertiisii ​​hore u sheegay in iskutallaabta lagu qodbo, la dhiman doono, oo haddana la sara kici doono. Laga bilaabo wakhtigaas, Ciise wuxuu bilaabay inuu xertiisii ​​u muujiyo inay tahay inuu Yeruusaalem aadayo oo uu aad u xanuunsado. Waxaa dilaya odayaasha, wadaaddada sare iyo culimmada, oo maalinta saddexaad waa la soo sara kicin doonaa (Matayos 16,21). Haddii Ciise runtii ka hadlay mucjisada ugu weyn ee arrintan la xiriirta, waxay ina tusineysaa inaan hubin karno inuu isagu wax walba ku kalsoon yahay.
Sarakicidda Ciise waxay ka dhigan tahay in dembiyadeenna oo dhan la dhaafay. Dhimashadii Ciise ayaa la sheegay markii wadaadka sare aadiyo meesha ugu qumman sanadkii hal mar maalinta kafaaraggudka in allabari lagu bixiyo dembiga. Waqtigii wadaadkii sare galay Quduuska barakaysan waxaa raacay shaki weyn oo reer binu Israa'iil: miyuu soo laaban doonaa mise maya? Waxay ahayd farxad markii uu ka soo baxay Karaamada barakaysan oo uu ku dhawaaqay cafiska Eebbe maxaa yeelay dhibanaha waxaa loo aqbalay sanad kale! Xertiisii ​​Ciise waxay rajeynayeen kan wax soo furtay: "Laakiin waxaan rajeyneynay inuu yahay kan Israa'iil soo furan lahaa." Oo waxaas oo dhanna waa maalintii saddexaad oo maanta ay tani dhacday » (Luukos 24,21).
Ciise waxaa lagu aasay dhagax weyn gadaashiisa maalmona ma jirin wax calaamad ah oo muujinaya inuu dib u soo laaban doono. Laakiin maalintii saddexaad, Ciise ayaa mar kale sara kacay. Sidii dib-u-soociddii wadaadka sare ee daaha gadaashiisa ay muujisay in allabarigiisa la aqbalay, sarakiciddii Ciise ayaa caddeysay in allabari dembiyadeenna Ilaah aqbalay.
Sarakiciddii Ciise waxay ka dhigan tahay in nolol cusub ay suurtagal tahay. Nolosha masiixiga waa wax aan ka badneyn aaminsanaanta waxyaabo gaar ah oo kusaabsan Ciise, waa ka qeyb qaadashadiisa. Bawlos wuxuu doorbidayaa inuu sharraxo waxa ay tahay inuu noqdo Masiixi isagoo ku muujiyay "Masiixa". Ereygan micnihiisu waa inaan ku xirnaano Masiix xagga iimaanka, Ruuxa Masiixu inagu dhex jiro, kheyraadkiisa oo dhanna annagaa leh. Sababta oo ah Masiixu wuu sara kacay, taas oo ku xidhan joogitaankiisa, waxaan ku noolahay isaga xaggiisa oo aan iskaashino.
Sarakiciddii Ciise waxay la micno tahay in cadowga ugu dambeeya, dhimashada laftiisa, laga adkaado. Ciise wuu bur buriyey awoodda dhimashada mar iyo dhammaan Malaki: "Ilaah baa sara kiciyey oo ka xoreeyay xanuunka foosha, maxaa yeelay suurtagal ma ahayn in dhimasho lagu qabto" (Falimaha Rasuullada 2,24). Sidaas darteed, "Sida qof kastaaba ugu dhinto Aadan, qof kasta oo Masiixa ku nool waa la soo noolayn doonaa" (1 Korintos 15,22). Layaab ma leh in Butros awood u lahaa inuu qoro: "Mahad waxaa leh Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix, kaasoo naxariistiisa weyn aawadeed noo soo nooleeysay rajo nool oo ku saabsan sarakiciddii Ciise Masiix kuwii dhintay, dhaxal aan kala go' lahayn, oo aan dhammaad lahayn oo aan dhammaad lahayn, ee jannada lagu hayo adiga .. (1 Butros 1,3: 4).
Maxaa yeelay Ciise wuxuu naftiisa dhiibtay wuuna aqbalay mar kale, maxaa yeelay Masiixu wuu kacay oo qabrigiina waa madhnaa, hadda waxaan ku nool nahay isaga, iyada oo ku xidhan joogitaankiisa, midnimadeenna aan la leenahay isaga.